SXAE-412 CNC n'ụzọ zuru ezu na-achacha agbacha akwụkwọ (ígwè ọrụ)-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Ibo language SXAE-412 CNC n'ụzọ zuru ezu na-achacha agbacha akwụkwọ (ígwè ọrụ)
Aha aha: igwe CNC zuru oke 4 igwe na-acha akwụkwọ ngebichi (igwe eji arụ ọrụ)
multifunctional, rotary, multicolor, maka ihe ndị e ji eme ihe na galvrical na oval, iko mmanya mmanya, karama iko mmanya, ite iko, iko iko, iko, akpa wdg.
1. Akụrụngwa na-elebanye anya usoro, na ọtụtụ ngwaọrụ.
2. Nhazi usoro teepu ahazi, nke kachasị mma.
3. Akụrụngwa akwụkwọ eji akpaaka, ihe niile a na-ebugharị: isi akwụkwọ, nhazi ihu, ntụgharị, akpa / ala, ihe niile a na-eme site na servo motors.
4. Ugbo nile na onye ọ bụla na-ebugharị ụgbọala, maka ntụgharị.
5. Ngbanwe ngwa ngwa ma dị mfe, site n'otu ngwaahịa gaa na ọzọ. Gbanwee mmegharị naanị na ihuenyo mmetụ.
6. Osimiri UV na-agwọta usoro, ogologo oge ndụ, ịchekwa ike.
7. Na-ewepu akpaaka, na-arụ ọrụ robot.
8. Ọrụ nchedo na OA.
1. Isi nwere ike dochie anya, isi ọkụ na-ekpo ọkụ, akwụkwọ ntanetị nke multicolor na ikpo ọkụ ọkụ.
2. Usoro nyocha igwefoto, maka ngwaahịa ndị na-arụ ọrụ mmiri, na-enweghị aha ndebanye aha, iji zere akara ahụ.
Mbipụta akwụkwọ: 1800-2100 Mpekere / awa (enweghi ike idozi ọdịdị dị iche iche)
Ngwa igwe: L 5400 * W 5000 * H 2400mm
Ike: AC 380V, 3-Phase, 50Hz / 60Hz, 23Kw (nkịtị UV), 5KW (LED UV)
ike dị ukwuu na arụmọrụ, ogologo oge na-adịgide adịgide, na-eme ka oge gị dị elu,
belata ụgwọ ọrụ, ọnụ ahịa dị mma, ihe ndị e dere na CE na-ebipụta ma na-ese onyinyo, ọrụ dị mfe, àgwà dị elu na-ahazi n'ụzọ zuru ezu CNC 4 akpaka ihuenyo na-arụ ọrụ na-arụpụta usoro ígwè.
Onye na-arụ ọrụ na-emepụta ihe CNC zuru ezu 4 agba ihuenyo na-edepụta ígwè ọrụ.
mgbanwe ngwa ngwa, ịrụ ọrụ nke ọma,
emepụta nke CNC kpamkpam rụọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
na-ebipụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpụrụ ọ bụla, ezigbo mmachi anya na ink opacity maka ibipụta akwụkwọ,